ဧပြီလ 2, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု5comments
ဒီ version ကို mysql ထောက်ခံများအတွက်ပြင်ဆင်ချက်ထည့်သွင်း 4.1. ယခင်ဗားရှင်းသင်တို့အဘို့အဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ အကယ်. အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ.
ကျွန်မကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် အဘယျသို့ နှင့် ဂျူလီယန် သူတို့ရဲ့အကူအညီအဘို့ဤစားမှုပြဿနာ debugging.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin
ဧပြီလ 16, 2009 တွင် 3:05 ညနေ
ဂရိတ် software ကို. ယနေ့ငါ့အဆိုက်ထဲမှာအားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက် Installed နှင့်ကသင့်အရာအားလုံးကိုတတ်. မခြောဘယ်မှာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကတောင်းဆိုမှုများကို log မှ. ကျနော်တို့စာသားတည်းဖြတ်ပြီးနောက်စိမ်းလန်းသောလှန်သောငယ်အဝါရောင်ပုံးကြိုက်. သို့သော်ကြိမ်မှာကျွန်တော်တစ်ခုလုံးကိုအပိုဒ်ကိုတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒီဂျပန်ဖို့ဆိုအင်္ဂလိပ်ကနေဘာသာနှင့်အတူဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ငယ်အဝါရောင်ပုံးရုံမပွု. ဒီလိုလုပ်ဖို့ကစာရေး delete နဲ့ခြစ် option ကိုမှစာရေးပြန်ရိုက်ပါရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်လိမ့်မယ်. ဘက်မူရင်းဘာသာစကားနဲ့ဗလာအယ်ဒီတာသေတ္တာအားဖြင့်ဒီတစ်ခါလည်းခြမ်း.
<က class = "comment ကိုပြန်ဖြေ-link ကို" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=zh-TW&prev=search&rurl=translate.google.com.tw&sl=my&u=http://transposh.org/my/goodbye-wordpress-org/?replytocom=7450&usg=ALkJrhjs0iVvGtTkdlS_MgQpCJf7jxjSMQ#respond" onclick = "addComment.moveFor​​m ပြန်လာပါ (; commentbody-7450 & quotes ;, & quotes, & quotes 7450 & quotes ;, & quotes, ;, & quotes quote & တုံ့ပြန်; 510 & quotes;)" Aria-တံဆိပ်ကပ် = "freeyorker မှ Reply"> Reply
ဧပြီလ 21, 2009 တွင် 12:56 နံနက်
ဧပြီလ 21, 2009 တွင် 8:04 နံနက်
သင်တို့အားငါဝစ်ဂျက်တစ်ခု option ကိုအဖြစ်ဘာသာစကား Icelandic ထည့်ပါလိမ့်မည်သည့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ပို့ခြင်းပါ၏, ငါမဆိုလျောက်ပတ်သောကွန်ပျူတာကူညီဘာသာပြန်ချက် tool ကိုမတွေ့ရှိကြပါပြီအဖြစ်, သငျသညျကို manually ဘာသာပြန်ဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်.
မေ 1, 2009 တွင် 11:41 ညနေ
ဤသည်အလွန်အသုံးဝင်သော software ကိုဘို့သင့်ကို thak,
အသုံးပြုသူကိုပြောပြကြောင်းသတိပေးရှိကြ၏လျှင်ဤစာသားကို Google မှာအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ထားသောကြောင့်အကြီးအဖြစ်လိမ့်မယ်,
ဥပမာတစ်ခု turkish စာမျက်နှာ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်ဘို့ဤကဲ့သို့သောသတိပေးခကျြကိုကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်
“ဒီ post ကို Google ကအလိုအလျှောက်တာကမှအင်္ဂလိပ်မှဘာသာပြန်ထားသောကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး”
မေ 1, 2009 တွင် 11:54 ညနေ
ဒါကလာမယ့် version ကိုပြုလိမ့်မည်, ကျွန်တော်တို့အကောင်အထည်ဖော်အပေါ်စီစဉ် “အဆငျ့” ဘာသာပြန်ချက်အကြောင်းကြားစာ၏အလိုအလျောက် tools တွေကိုအားဖြင့်လူသားခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဘာသာပြန်ချက်ပမာဏအပေါ်အခြေခံပြီး.
လက်မှတ် #328 (svn repo) ပိတ်သိမ်း ဇူလိုင်လ 1, 2018
လက်မှတ် #328 (svn repo) ဖန်တီး ဇူလိုင်လ 1, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [7ef2701]: အပြည့်အဝဗားရှင်းအတွက်အမှုအရာအပြည့်အဝဗားရှင်းနေသင့်တယ် ဇွန်လ 27, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [97c2380]: v1.0.1 လွှတ်ပေးရန်အံ့ဆဲဆဲဖြစ်ပါသည် ဇွန်လ 27, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [5b45805]: အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ / Transposh / Widgets တွေကနေဝစ်ဂျက်တင် Allow, များအတွက်အသုံးဝင်သော ... ဇွန်လ 19, 2018
kismet အပေါ် version 1.0.0 – အချိန်ရောက်လာပြီ
ကမ်းလှမ်းမှု အပေါ် version 0.9.9.2 – မ git